Ithanga Cinnamon Porridge | Bezzia
UMaria vazquez | 11/05/2021 10:00 | Ukupheka okulula
Ingabe ufuna ibhulakufesi elehlukile ngempelasonto? EMpumalanga iphalishi lesinamoni lamathanga Kuyindlela enhle yokuqala usuku. Iphalishi lingelinye lamakhefu esiwathandayo futhi basinqobile sibonga ukunambitheka kwawo nokuthinta okumnandi kwethanga.
Ithanga ukuphela kwento ethambisa ubumnandi kuleli phalishi, liyenze inketho enempilo kakhulu. Inketho ye-vegan uma usebenzisa amanzi noma isiphuzo semifino ukuyilungisa. Sithanda ukuwahlanganisa womabili futhi ngokujwayelekile siyophuza i-oatmeal noma i-alimondi ukukwenza.
Ungaliqedela leli phalishi ngezindlela ezahlukene. Sikwenzile ngoshokoledi nezinsuku, kepha futhi ungakwenza ngezithelo ezomisiwe ezinjengama-walnuts noma ama-hazelnut, azokwengeza ukuthinta okunamandla ku-iresiphi. Kunezinketho eziningi zokuqedela leli phalishi, funa okuthandayo! Futhi uma uthanda iphalishi, unganqikazi ukuzama ubusuku oatmeal no-almond ukhilimu ukuthi siphakamise emasontweni ambalwa edlule.
1 Izithako zomuntu ongu-1
Izithako zomuntu ongu-1
90 g. Ithanga elosiwe eligosiwe
3 wezipuni oat ishq
I-alimondi noma isiphuzo se-oatmeal size simbozwe (noma amanzi noma ubisi)
1 ounce ushokoledi omnyama
Amantongomane noma izithelo ezingenamanzi zokuhlobisa
Faka epanini le- i-puree yethanga elosiwe, oats ogoqiwe kanye 1/2 isipuni sesinamoni.
Mboza ngesiphuzo semifino, amanzi noma ubisi, hlanganisa bese pheka ngokushisa okuphansi cishe imizuzu eyi-10 noma ize ibe nokuthungwa okufunwayo. Khumbula ukunyakazisa inhlanganisela ngezikhathi ezithile ukuze inganamatheli futhi izuze ukhilimu.
Uma usuphekiwe, phaka iphalishi lethanga endishini bese uliqedelela nge Ounce ushokoledi, amanye amadethi aqoshiwe nesinamoni encane yomhlabathi.
Khonza ushisayo futhi ujabulele nge-spoonful.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ungadliwa » Ukupheka okulula » Iphalishi lesinamoni lamathanga
Kungenzeka yini ukuphikisana nomlingani wakho ningalwi?